अस्लिन् भिडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आले राजीनामा दिने तयारीमा ! – Cn Chautari
फागुण ३, २०७८ मंगलबार 1031
सामाजिक सञ्जालमा ‘जथाभावी प्रतिक्रिया’ लेखेको भन्दै आक्रोशित रहेका मन्त्री आलेले टेलिफोनमार्फत एक युवालाई ‘अपहरण’सम्मको धम्की दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । मन्त्री आलेले धम्की दिँदै गरेको फोन वार्ता यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि ।
उनको सर्वत्रराजिनामाको माग उठेको छ ।एमाले नेता भीम रावलले ‘पदीय मर्यादा, सामाजिक शिष्टता, नैतिकता र कानूनको समेत खिल्ली उडाउने मन्त्रीलाई प्रम देउवा र नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले पदमा राखिरहनु हुन्छ भने ।
उहाँहरूमाथि पनि जनताले गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ । हेरौं उहाँ हरू जनता, समाज र कानूनप्रति कति जिम्मेवार हुनुहुँदो रहेछ ?’एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले पनि आलेको उक्त धम्कीको आलो चना गरेकी छिन् । ‘हद नाघेर अश्लिल बोल्ने आमालाई समेत जोडेर धावा बोल्ने।
प्रेम आलेलाई तुरुन्त बर्खास्त गर’ भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट माग गरेकी छिन् ।यो संवाद एमाले कार्यकर्ता जगत ओलीको फेसबुकबाट सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो छ, मन्त्री आले र युवाबीचको संवादको सम्पादित अंश, संवादमा अश्लिल शव्दको प्रयोग भएकाले ती शव्द हटाइएको छ ।
Prev५० लाख माग्दा आलेले वास्ता नगरेपछि सार्वजनिक गरियो अडियो
Next२/४ जना ट्वाँके, हरुले, एमसिसीको बिरोध गरेर केही हुदैन, शक्तिशाली मुलुक,सँग मजाक गर्ने? (हेर्नुहोस भिडियो)”
भर्खरै आयो खु’सी’को ख’ब’र भोलि पल शाह ध’राै’टीमा छुट्दै सबैजनाले सक्दो शेयर गर्नु होला (हेर्नुहोस भिडियो)
ओली फेरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने